Maxkamadeynta Rga loo heysto Shabaabnimo oo ka socota Gaalkacyo - Awdinle Online
Maxkamadeynta Rga loo heysto Shabaabnimo oo ka socota Gaalkacyo
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Dowlad Goboleedka Puntland ayaa maanta u fariisAtey FadhigIi Labaad ee Dhageysiga EedaysanayaaL gaaraya 11 qof oo 5 kamid ah lagu eedeeyey in ay kamid yihiin Ururka Al-Shabaab.
Maxkamadeynta ragga ayaa waxaa ay ka socotaa Xarunta Maxkamadda ay ku leedahay Magaalada Gaalkacyo, waxaana ragga la maxkamadeeynayo ku jira 5 Xubnood oo lagu eedeeyay dilal ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug.
Xeer Ilaalinta Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Puntland ayaa soo bandhigtay magaclyada Shanta Xubnood looga dhex yaqaanay Ururka Al-Shabaab oo ay kula Shaqeeynayeen,kuwaas oo kala ah.
Saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Dowlad Goboleedka Puntland ay xukun ku rido Raggaas iyo 6 kale oo lagu eedeeyay dambiyo kala duwan oo ay galeen.
Previous articleDeegaanada ay Al-Shabaab ka maamulaan Soomaaliya oo maanta laga ciidayo